Qiimaha lacagta digital-ka Bitcoin ayaa gaartay rikoor cusub markii ay ka gudubtay $22kun… – Hagaag.com
Qiimaha lacagta digital-ka Bitcoin ayaa gaartay rikoor cusub markii ay ka gudubtay $22kun…
Posted on 17 Diseembar 2020 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Qiimaha lacagta digital-ka ee loo yaqaan ‘Bitcoin’, ayaa gaartay rikoodh cusub bilowgii ganacsiga maanta oo Khamiis ah, $22.16 kun halkii Bitcoin, iyada oo ay sii kordheyso baahida loo qabo maalgashiyada halista badan leh.
Maalgashadayaashu waxay ka heleen lacagaha digital-ka qalab maalgashi oo macquul ah, ka dib markii qiimaha dahabka iyo dollarkuba ay hoos u dhaceen; Taas oo ka dhigtay sideedii bilood ee la soo dhaafay meel ammaan ah oo ay ku ganacsadaan sababo la xiriira fayraska Corona.
Qiimaha Bitcoin wuxuu kordhay 207% tan iyo bilowgii sanadkan, wuxuu ahaa $7,208 halkii Bitcoin dhamaadka 2019.
Ilaa iyo saaka, tirada Bitcoin ee laga ganacsado suuqyada adduunka ayaa gaadhay 18 milyan iyo 573 kun xabo oo Bitcoin ah oo ka mid ah tirada guud 21 milyan, tirada guud ee Bitcoin oo la heli karo ee iibka iyo wareejinta.
Bitcoin ayaa waxay diiwaangelisay heerkeedii ugu sarreeyay ee taariikhiga ahaa 19,7 kun oo doolar halkii Bitcoin dhammaadkii 2017, ka dib markii ay biowday safar hoobasho ah, waxayna gaartay 3500 doolar horaantii sanadkii hore, ka hor inta aysan dib u bilaabin duulimaad deg deg ah oo laga soo bilaabo bishii May ee la soo dhaafay.
Tan iyo usbuucii la soo dhaafay, lacagta ugu caansan ee digital-ka ayaa jabisay heerkii ugu sarreeyay ee qiimaha halkii Bitcoin.
Waxaa jira sababo kale oo ku saabsan qiimaha sarreeya ee Bitcoin oo ka mid ah qorshaha PayPal ee loogu oggolaanayo macaamiisha inay ku bixiyaan lacagaha loo yaqaan ‘cryptocurrencies’.